AMISOM iyo Al-Shabaab oo siyaabo kala duwan uga hadlay isbedelka ka dhacay magaalada Jowhar
Afhayeenka Taliska ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumud iyo afhayeenka ururka Al-Shabaab Abuu Muscab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isbedelka ka dhacay maanta magaalada Jowhar iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sh/dhexe oo u gacan galay ciidamada Dowladda.
Col. Cali Aadan Xumud afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa xaqiijiyay in ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay saakay si buuxda u qabsadeen magaalada Jowhar, isagoo sheegay inay aroortii hore ay weerar qorsheysan ku qaadeen magaalada Jowhar iyo Deg. Mahadaay oo 90Km u jirta magaalada Muqdisho.
Waxa uu sheegay Col. Cali Aadan Xumud in ciidamada Dowladda iyo AMISOM markii ay galeen magaalada Jowhar ay bilaabeen howlgallo amniga lagu sugayo, wuxuuna tilmaamay in markii ay magaalada gelayeen ay ka dhaceen dagaallo aan sidaasi weyneyn.
Dhinaca kale afhayeenka ururka Al-Shabaab Sheekh C/Casiis Abuu Muscab oo u waramayay wakaalada wararka AFP ayaa sheegay inay isaga baxeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, taasi oo uu ku sheegay inay tahay xeelado dagaal oo ay la damacsan yihiin ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
"Mujaahidiinta xeelado dagaal ayay uga baxeen magaalada Jowhar, waxayna ku sugan yihiin meel aan magalada ka dheereyn" ayuu yiri Sheekh C/Casiis Abuu Muscab oo intaasi raaciyay inay diyaariyeen mowjado dagaal iyo qaraxyo qorsheysan.a